Vaovao - Nanangona vola haingana ireo mpankafy BTS Indiana hiadiana amin'ny fitomboan'ny firenena
Ny mpankafy BTS indianina dia manangona vola haingana hiadiana amin'ny fitomboan'ny firenena
krizy ateraky ny coronavirus
Ao anatin'ny krizy virus coronavirus any India dia nandray andraikitra ny mpankafy BTS hanangona vola hanampiana ireo sahirana.
Ny herinandro lasa teo, ny ezaka fanampiana Covid-19 izay natambaran'ny vondrona iray avy amin'ny klioban'ny mpankafy BTS fantatra amin'ny anarana hoe Army, dia nanangona vola mitentina roa tapitrisa dolara (29 000 dolara amerikana).
Miara-miasa amin'ny tranokalan'ny vahoaka Indiana Milaap, ny kaonty media sosialy fantatra amin'ny anarana hoe "Covid Relief India avy amin'ny BTS Army" dia nanangona vola mitentina roa tapitrisa tao anatin'ny 24 ora, niaraka tamin'ny mpanohana 2.465 nanome.
Manana fanontaniana momba ny lohahevitra sy fironana lehibe indrindra manerantany ve ianao? Raiso ny valiny amin'ny fahalalana SCMP, ny votoatinay vaovao misy atiny voafantina miaraka amin'ireo mpanazava, FAQ, fanadihadiana ary infografika izay natolotry ny ekipa mpandresy anay.
Ny fanangonam-bola dia nateraka nandritra ny onjam-piarem-paremavirus faharoa tao amin'ny firenena, ary tranga tsy nisy hatrizay ary fahafatesan'olona rehefa niatrika krizy ara-pahasalamana i India vokatry ny tsy fahampian'ny famatsiana ara-pitsaboana - anisan'izany ny tsy fisian'ny oxygen - ary ny karazana virus vaovao.
Ny ezaka fanampiana nataon'ny Tafika dia nifantoka indrindra tamin'ny famatsiana oxygen sy kojakoja ara-pahasalamana hafa, ary koa sakafo ho an'ireo izay mila izany. Ny laharam-pahamehana dia nanisy laharam-pahamehana an'i Maharashtra sy Delhi, izay toerana mampidi-doza ny toe-java-misy.
Araka ny voalazan'ny Covid-19 tracker avy amin'ny Johns Hopkins University, hatramin'ny Alatsinainy maraina, dia India efa ho 17 tapitrisa no maty, ary 192 000 no maty. Tao anatin'ny herinandro lasa, nitatitra fanandramana tsara 300.000 isan'andro i India; maro ny ahiahy amin'ny tsy fitaterana aretina.
Ny marary coronavirus any India sempotra sempotra ao anatin'ny tsy fahampian'ny oxygen Firenena maromaro no nanambara fa hanome fanampiana, saingy ny patanty kosa dia mitazona an'i India sy ny firenen-kafa tsy hamokatra ampy ny vaksininy hitsaboana ny mponina ao aminy.
Lahatsoratra bebe kokoa avy amin'ny SCMP
Ny fanovana ny rafitry ny fifidianana ao Hong Kong dia mbola mivarotra hatrany Any Kambodza, mamela ny mpiasan-damba any Phnom Penh ny fanidiana ny coronavirus, noana ireo mpivarotra tsena Kintana koreana 8 no 'nofoanana' taorian'ny scandals: nesorina hiala ny K-drama Island i Seo Ye-ji, raha nandao an'i River kosa i Ji Soo, ary mety hitory 2.7 tapitrisa dolara amerikana. Adihevitra amin'ny sisintany Shina-India: hadisoana ve ny fivoahan'i New Delhi avy ao amin'ny farihy Pangong Tso?
Ao anatin'ny fihenjanana amerikana sy sinoa dia tsy maintsy miaraka i Azia mba hamerina ny lahatra
Tany am-piandohana dia nipoitra tao amin'ny South China Morning Post (www.scmp.com), ny fampahalalam-baovao lehibe mitatitra momba an'i Shina sy Azia.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava fandidiana 3ply, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava Ffp3,